China Barbed Wire orinasa sy mpanamboatra |Shengsong
Ny tariby barbed dia azo ampiasaina betsaka ho fitaovana ho an'ny fefy tariby voatenona mba hamoronana rafitra fefy na rafitra fiarovana.Antsoina hoe fefy tariby na barbed obstacles izy io rehefa ampiasaina irery eo amin'ny rindrina na ny trano mba hanomezana karazana fiarovana.Ny tariby barbed ihany koa dia nosoratana ho toy ny kasety satria ampiasaina amin'ny tsipika foana izy io mba hamoronana karazana kasety.
Barbed Wire Length Per Roll dia karazana fefy fiarovana vaovao manana tombony toy ny bika aman'endriny, ny vidiny ara-toekarena sy ny azo ampiharina, ary ny fanorenana mety. Miaro ny toeram-pitrandrahana, zaridaina sy trano, sisin-tany, fiarovana, ary fefy fonja.
Wire Barbed Galvanized Hot DIP ho an'ny fefy fiarovana ny fonja
Wire Materials: Tafo vy vy, PVC mifono vy tariby amin'ny manga, maitso, mavo sy loko hafa.
ara-nofo: tariby GI natsoboka mafana, tariby GI Elector, tariby SS, tariby mifono PVC, tariby vy avo
Karazana fanenomana tariby barbed:
1) tariby mitsivalana tokana
2) tariby miolakolaka roa
3) Pallet vy / hazo
Fampiharana:arovy ny sisin-tany ahitra, lalamby, lalambe, sisintany miaramila, prison, tranom-panjakana.
Fampiasana: Ampiasaina betsaka amin'ny saha miaramila, fonja, trano fitazonana, tranom-panjakana ary trano fiarovam-pirenena hafa.Tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny barbed kasety dia toa lasa malaza indrindra avo-kilasy fencing tariby ho an'ny tsy miaramila sy ny fiarovana ny firenena fampiharana, fa koa ho an'ny trano bongony sy ny fiaraha-monina fefy, ary ny hafa trano manokana.
teo aloha: Coil Nails
Manaraka: Wire hareza